XOG: Sidee xilka looga qaaday Guddoomiyaha Guddiga Doorashada? (Cidda taageersan & xubnaha ku haray) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG: Sidee xilka looga qaaday Guddoomiyaha Guddiga Doorashada? (Cidda taageersan & xubnaha ku haray) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG: Sidee xilka looga qaaday Guddoomiyaha Guddiga Doorashada? (Cidda taageersan & xubnaha ku haray)
Guddoomiyihii Guddiga Doorashada Heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa xilkii laga qaaday, kadib khilaaf iyo kala qeybsanaan uu ka dhex dhaliyey Guddiga.
15 xubnood oo ka mida Guddiga Doorashooyinka ee Heer Federal ee 2020-2021 ayaa u codeeyey inay xilka ka qaadeen guddoomiyaha Guddiga Mohamed Hassan Cirro, sida uu shaaciyey Guddoomiye ku xigeenka Guddiga
Waxaa lagu soo eedeeyay inuu xadgudub joogto ah uu ku sameeyay sharaftii guddiyada Doorashadooyin, wax-la-tashi ahna la sameyn madaxda Guddiyada kale, isla markaana lulmiyay madax bannaanidii Guddiga, isagoo qaatay go’aamnno halis ah oo keligiis uu ku yahay, uuna lumiyey xiriirka Golaha Wadatashiga.
Maxamed Xasan Cirro ayaa waxaa ku haray xubno ilaa shan ah, wuxuuna taageero ka heystaa Madaxtooyada Soomaaliya, isagoo diiday xil ka qadista lag usmeeyay isagoo ku dooday innuu weli yahay guddoomiyaha Guddiga FIET.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in Cirro aanu taageero ku dhex heysan guddiga Doorashada, balse ujeedku yahay inuu ku adkeysto xilkiisa, isla markaana khilaafka Guddiga uu jiitamo, si doorashadu u socon weydo.
Previous articleGolaha Hoggaaminka Beesha H/Gidir oo si buuxda u taageeray Hoggaanka RW Rooble
Next articleXukuumadda oo u digtay Saraakiisha iyo Madaxda loo adeegsanayo Abaabulka ka dhan ah RW Rooble